machi | Otu Di na Nwunye
March 28, 2017 + Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ebe nkiri ebe nkiri, Germany, History, Nhazi njem
Ihe ị ga-eme na Munich
Ikpebi ihe ị ga-eme na Munich bụ ihe dị ukwuu banyere akụkọ ihe mere eme ka ọ na-efu efu. Munich bụ obodo siri ike nke mmadụ nwere ike ịsị na, n'eziokwu, ọ bụ nke ya. Akụkọ ihe mere eme, nke ọ bụla dị mma, nke dị njọ, ma ọ bụ na-atụ ụjọ na-atụ egwu, niile dị iche iche. Ebe a na-akpata ọgba aghara mba na-akpata na Hitler Nazi Germany, Munich toro site na ndị aghụghọ ... GỤKWUO
January 16, 2017 + Arts & Music, Di na Nwunye, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Germany, Transportation
Ọtụtụ Ado Ihe Munich
E nwere ụfọdụ obodo ndị na-adị ka ndị na-enweghị mmasị mgbe ha gara na nke gara aga, ebe ndị na-agbagwoju anya bụ ndị yiri ka ha nwere ihe zoro ezo. Ihe dị mgbagwoju anya, ihe karịrị labelụ karịrị nnọọ ike ịkọwa. Echere m na ọ bụ nna nna ochie, ụmụ nke ọtụtụ narị afọ nke ngwaahịa American bụ ndị kpọrọbu ala na Netherlands na Germany. Anyị bụ ụmụ nke ụdị ... GỤKWUO